Messi oo markii ugu horeysay ka aragti dhiibtay xiddiga dhawaan galka ah kooxda Barcelona ee Frenkie de Jong – Gool FM
David Alaba oo qeyb ka noqday qorshaha dib u dhiska Kooxda Manchester City ee xagaagan xilli Leroy Sané…
Tababare Pep Guardiola oo sharraxay qorshahooda la soo saxiixashada Jadon Sancho
Philippe Coutinho oo ka samraya kala bar mushaharkiisa si uu ugu ciyaaro koox aanan ahayn Barcelona
Horudhac: Real Madrid vs Getafe… (Los Blancos oo caawa doonaysa inay afar dhibcood hoggaanka horyaalka La Liga kaga qabato Barca)
Horudhac: Manchester City vs Liverpool… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka ku guuleystayaasha Premier League ay booqanayaan Etihad)
Chelsea oo guuldaro niyad-jab leh kala kulantay Kooxda West Ham United… +SAWIRRO
Arsenal oo guul ay u qalantay garoonkeeda Emirates kaga gaartay kooxda Norwich City… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha West Ham iyo Chelsea ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka Getafe
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Arsenal iyo Norwich City ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Messi oo markii ugu horeysay ka aragti dhiibtay xiddiga dhawaan galka ah kooxda Barcelona ee Frenkie de Jong
Dajiye September 11, 2019
(Barcelona) 11 Sebt 2019. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa kalsooni ku qaba in Frenkie de Jong uusan wax dhibaato ah kala kulmi doonin sida uu ula qabsan lahaa naadiga Blaugrana, sababa la xiriira inuu ka yimid akadeemiyad ku tiirsan falsafad la mid ah tan Barça.
Lionel Messi iyo Frenkie de Jong ayaa isbuucyo ka hor, waxay ku guuleysteen abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa khadkii dhexe tartanka Champions League oo loo caleemo saaray da’ayarka reer Holland, halka halyeeyga reer Argantina isna uu ku guuleystay abaal-marinta weeraryahankii ugu fiicnaa.
Haddaba Lionel Messi oo ka hadlayay xiddiga da’aday yar ee reer Holland ee Frenkie de Jong ayaa wuxuu yiri:
“Wey u fududaan doontaa Frenkie de Jong inuu la qabsado kooxda Barcelona, sababtoo ah wuxuu xilli ciyaareed cajiib ah la qaatay kooxda Ajax kulamada horyaalka Holland iyo tartanka Champions League”.
“Waa ciyaaryahan leh astaamo gaar ah oo naga caawin doona kulamada waa weyn, wuxuu ka yimid akadeemiyad la mid ah tan Barcelona, waxaan u maleynayaa inay arrimahaas u fududeyn doonaan geedi socodka wada noolaanshiyaha kooxda”.
Xiddigaha Lionel Messi iyo Frenkie de Jong ayaan wali si wada jir ah kaga soo muuqanin kooxda Barcelona, sababa la xiriira in xiddiga reer Argantina uu ku maqan yahay dhaawac tan iyo bishii August ee lasoo dhaafay, taasoo ka dhigtay inuu seego kulamadii ugu horreeyay ee kooxda reer Catalonia ay ka ciyaartay horyaalka Spain.
“Lukaku wuxuu si fudud kaga sarra mari karaa Cristiano Ronaldo” – laacib hore ee kooxda Inter Milan ah
“Kaliya uma nooli abaal-marinada shaqsiyadeed” – Ronaldo oo afka furtay kaddib bandhigiisii xalay